Ukuchongwa kweRosari Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Imvelaphi yeli gama elithi «jaculatoria» livela kwigama lesiLatini elithi «jaculari» elithi ngeSpanish lithetha «ukumilisela», ke kunokuthiwa UJacularias del RosarioSisivakalisi esifutshane kakhulu esithethwa kwintetho enye yomoya; Eli binzana elifutshane elibonakaliswe kwi-exhale, umphefumlo okanye umoya kwaye usetyenziselwa ukudumisa, ukubulela okanye ukucela uncedo kuThixo.
Uthandaza njani i-ejaculation.
1 Ukwahluka okwahlukileyo kweRosari
1.1 Kutheni le nto iJacuculations ngexesha leRosari eNgcwele?
1.2 Olunye ulungelelwaniso onokuthi uthandaze ngexesha leRosari eNgcwele
1.3 Ukunyuka kwiNtombikazi kaMariya
1.4 Ukuphuma kwabafileyo.
1.5 Ukuchazwa kwenyanga nganye yonyaka.
Ukwahluka okwahlukileyo kweRosari
Isithuba se ukuthobaNgandlela ithile, inikwa into efunwa nguPaul Saint, "ukuthandaza ungayeki"; Oku kubonisa ukuba oku kuyasinceda ukuba siphile "kwimozulu yomthandazo", ngokufanayo, ukuba sazi ubukho beNkosi, uMariya kunye nobudlelane babangcwele kubomi bethu bemihla ngemihla, ukongeza ekomelezeni unxibelelwano lwethu lothando kubo.
Ngoku, kwelinye icala, sinezinto ezininzi ezenziweyo, ezinikezelwe kuThixo, kuMariya nakubo bonke abangcwele, kungoko sinokuthatha njengomzekelo weyona miSebenzi eyaziwayo eyaziwa ngokuba yile ilandelayo:
"Nkosi, ndenzele inceba."
"Nkosi yam noThixo wam".
"Yesu Ndithembele kuwe."
"Moya oyiNgcwele, ndikhanyisele."
«Mariya oyiNgcwele, sithandazele».
"NguYesu, uMariya noJosefu".
"Bingelela uMariya ococekileyo, okhulelwe ngaphandle kwesono!".
"Intliziyo Engcwele kaYesu, ndiyathemba kuwe."
«Yima, lutshaba, ukuba Intliziyo Engcwele ikunye nam». Ezi zimbini zokugqibela zikwabizwa ngokuba yimizekelo ye-ejaculations, ezinikezelwe kwiNgcwele yeentliziyo zikaYesu.
Kutheni le nto iJacuculations ngexesha leRosari eNgcwele?
Ngokwesiqhelo emva kokuthandaza irosari okanye emva kwengoma apho uZiqu-zintathu Ongcwele adunyiswa khona kunye: Uzuko kuYise, nakuNyana, nakuMoya oyiNgcwele. Njengoko kwakunjalo ekuqaleni, ngoku nangonaphakade, ngonaphakade kanaphakade. Amen. Ukuchithwa kugcinwa.
Ezi zinto zichaziweyo ziqinisekisa amandla erosari kwaye inokuba lunxibelelwano olunamandla lokucinga ngeemfihlakalo zobomi bukaYesu noMama wakhe. Ke ngoko irosari engcwele iba yenye yeendlela ezingakholelekiyo ekufuneka sizukise kwaye sibonise intshiseko yethu ngazo iNtombikazi enguMariya, kuba ngala mathuba esikhumbula ngawo ubomi bukaYesu, sinokuwondla umphefumlo wethu ngothando olusulungekileyo nenceba engazange ibekho.
Kubalulekile ukwenza i-rosari kunye ne-ejaculations ehambelanayo, kuba kuzo zonke izibhengezo ezenziwe yiNtombikazi, into ebehlala ecela kukuba bonke abantwana bakaThixo bonyuse ukholo lwethu ngokusebenzisa imithandazo nemithandazo.
Olunye ulungelelwaniso onokuthi uthandaze ngexesha leRosari eNgcwele
Ukwazi indlela yokuthandaza iJaculario, kuya kufuneka uyithathele ingqalelo loo nto, ileta V ithetha iVersiculum (ivesi), kunye no-R kuthetha i-Responsum (impendulo). Kufuneka iqatshelwe into yokuba u "V" uyakuthi ngubani oza kuba noxanduva lokukhokhela i-ejaculation kwaye u "R" uyakuphinda-phindwa ngabo bakhoyo abaza kwenza umthandazo.
V. UMariya, uMama woBabalo, uMama weNceba,
R. Ebomini nakwi ukufa sikhusele nkosazana enkulu.
V. Makudunyiswe kubulewe ngamaxesha onke kweYona Ngcwele neNgcwele kaThixo iSibingelelo.
R. Kwaye kusikelelwe ngonaphakade uMthethelelo oNgcwele ongagungqiyo weNtombikazi kaMariya, uMama kaThixo noMama wethu.
V. Sithandazele uMama oyiNgcwele kaThixo,
R. ukuze silungele ukufikelela kwizithembiso zeNkosi yethu uYesu Krestu.
V. UMariya oNgcwele waseGuadalupe,
Ukunyuka kwiNtombikazi kaMariya
R. Sindisa ilizwe lethu kwaye ugcine ukholo lwethu.
V. UMariya oNgcwele ngendlela elungileyo,
R. Senze ukuba sifike ngokukhuselekileyo kwindawo esiya kuyo.
V. Ngokukhulelwa kwakho okucocekileyo, oh Princess Princess!
R. Ucoceko olukhulu kakhulu sikucela ngokusuka entliziyweni.
V. Ukumkanikazi woXolo ongenasiphako,
V. Mama wothando, iintlungu nenceba,
V. Ukusuka kwiSango lesiHogo
R. Thatha iNkosi umphefumlo wakhe.
V. Mnike, Nkosi, ukuphumla okungunaphakade,
R. kwaye ukukhanya okungapheliyo makukhanye kuye.
V. Wanga umphefumlo ka (N. womfi) ngenceba kaThixo ungaphumla ngoxolo.
V. Ngamana uThixo wamsindisa kwintlungu,
R. Kwaye umse ekuphumleni.
Ukuchazwa kwenyanga nganye yonyaka.
NgoJanuwari Elona Gama Lingcwele likaYesu
V. Kothi xa kubizwa iGama lakhe eliNgcwele,
R. UYesu uhlala ehlala kuyo yonke indawo asikelelwe kwaye ahlonishwe.
NgoFebruwari Usapho Olungcwele
V. Sagrada Familia: wongamele ikhaya lethu
R. Ukuba njengowakho, uzele luthando noxolo.
Ngomhla kaMatshi San José
V. Lord Saint Joseph: ngamana singafunda kuwe yonke imihla
R. Ukuthanda nokukhonza uYesu noMariya ngakumbi nangcono.
V. UYesu ovukileyo, owoyisa ukufa nesono,
R. Siphe ukuba sonwabe ngonaphakade ecaleni Kwakho.
Ngamana uMariya oyiNtombi
V. Intombi Enyulu kaMariya: Ngamana ubomi bethu bonke
R. Sazise ngendlela yokuluxelisa ukholo lwakho, uthando, ubunyulu kunye nokuthobeka.
Juni Intliziyo Engcwele kaYesu
V. Intliziyo eNgcwele kaYesu, ndiyathemba kuwe
R. Kwintliziyo enothando efana neyakho yitshintshe eyam.
Julayi Igazi elixabisekileyo likaKristu
V. Krestu, enkosi ngokuphalaza igazi lakho ngentlawulelo yethu
R. Kwaye ngokusinika yona kwi-Ekaristi, Sela usindiso lwanaphakade.
Nge-Agasti Intliziyo engagungqiyo kaMariya
V. Intliziyo engafezekanga kaMariya, singcwalisa usuku lwethu kuwe,
R. Kulungile, ukuze silandele uYesu sidinga ukukhuselwa kunye nokukhokelwa nguwe.
NgoSeptemba iBhayibhile eNgcwele
V. INkosi: Ndiyabulela ngeLizwi lakho. Siphe ukumthanda,
R. Yibonise, uyiphile kwaye unxibelelane nayo.
Okthobha iRosari eNgcwele
V. Yesu: Ngamana uMama wakho angasinceda kwiRosari eNgcwele
R. Ukukucinga, sazi, sikulandele kwaye sikuthande.
NgoNovemba iMimoya Esikelelekileyo kwiPurigator
V. INkosi: Sithandazela iMiphefumlo ePurgatory;
R. Banike intuthuzelo yakho kwaye ubakhokelele ezulwini kungekudala.
Ukuza kukaDisemba kunye IKrismesi
V. Bawo: ngothando wathumela uNyana wakho kusindiso lwethu;
R. Kwanga ukukhanya kwakhe kungakhanyisa umhlaba kwaye kuzalise iintliziyo zethu ngoxolo lwaKhe.
Ngale ndlela sigqiba ngeziseko zeJacularia. Ukuba uluthandile olu lwazi, siyakumema ukuba ungene kwiwebhusayithi yethu ukuze ufunde ngakumbi imithandazo kunye nolwazi olunje Umthandazo wokufumana izinto ezilahlekileyo. Ngokukwanjalo, siyakumema ukuba ubukele le vidiyo ilandelayo ukuze ufunde ngakumbi ngesi sihloko.